Waa maxay aragtiada Mareykanka ee ka bixitaanka Al Shabab magaalada Kismaayo Soomaalinews.com 30 Sep 12, 10:12
Dowlada Mareykanka ayaa marki ugu horeysay ka hadashay duulaanka AMISOM iyo ciidanka Dowlada kula wareegeen qeybo ka mid ah Kismaayo iyo saameynta Al Shabab ee ka bixitaanka magaalada.
Kaaliyaha Xoghaya Arimaha Dibada Mareyeknka ee Africa Johnnie Carson ayaa rumeysan in dagaalka uu sii socon doono isla markaana AL Shabab ay bilaabi doonto waji kale oo dagaal oo ay suurta gal tahay in ay ku qaadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada.
�Al Shabab si buuxda wali loogama guuleysan, waxaanu rajeyneynaa in dagaalka uu sii socon doono iyagoo Al Shabab ay soo qaadi doonaan weeraro ka dhan ah AMISOM iyo Dowlada Soomaaliya, laakin si kastaba wuu saameeyey howlgalka hada socda,� ayuu yiri Carson oo wareysi siiyey VOA.
Mr. Carson ayaa sheegay in howlgalka sadex geesoodka ay oo ay 18-ki bilood ee lasoo dhaafay iska kaashadeen AMISOM, Kenya iyo Ethiopia oo kaalmo u yahay Dowlada cusub ee Soomaaliya.
�Dhamaan horumaradaan uma taagna oo kaliyah guul milatari ee waxaa ay qeyb ka tahay oo ku jira horumaro laga sameeyey xaga siyaasada iyo xasiloonidi uu dalkaan u baahnaa oo soo laabaneyso,� ayuu .
Mas,uulkan oo ka hadlayey rajada dowlada cusub iyo sida uu u wajahi doono Mareykanka ayaa sheegay in mar kale aysan imaan doonin qab qablayaal dagaal, dagaalada ku saleysnaa habka qabaa,ilka iyo maleeshiyaadka qabilka, waxa kale oo uu intaasi raaciyey in dalka ay ka bixi doonaan ciidamada gobolka isla markaana dalka ay la wareegi doonaan ciidamo tababaran oo Soomaali ah.
Ciidamada Kenya iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ayaa qabsaday xaafadaha dhinaca Dakada Kismaayo, hase ahaatee wali maysan u galin gudaha xilli Al Shabab ay faarujiyeen guud ahaan magaalada. Gasho xayeeysiin FREE ah iibka.com ©2008 soomaalinews.com admin@soomaalinews.com :TEL: 00442081800698